09/07/2020 – Asian Harm Reduction Network (AHRN)
Starting CBS testing activity
09/07/2020 by albert wilson Posted in Activities, Home-Slider
လူထုအခြေပြု HIV ကနဦးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း စတင်ခြင်း
AHRN ဖားကန့်အဖွဲ့မှ ဇူလိုင်လ ၁ရက် ၂၀၂ဝခုနှစ် မှစ၍ လူထုအခြေပြု HIV ကနဦးစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ ခုခံကျ/ကာလသား ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ AHRN ဖားကန့်အဖွဲ့သည် လက်ရှိတွင် ဖားကန့် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် ၅ခုနှင့် ကျေးရွာ ၁၅ ရွာတို့၌ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက် နွယ်သော အန္တရာယ်များ လျော့ပါးရေး လုပ်ငန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည်။ ယခု လူထုအခြေပြု HIV ကနဦးစစ်ဆေးခြင်းသည် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲ/ထိုးသွင်းသူများအကြား HIV ပိုးရှိမရှိအခြေအနေကို ယခင်ထက် ပိုမို သိရှိနိုင်လာခြင်း၊ လူသိမခံပဲ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့နိုင် လာပြီး HIV ပိုးရှိမရှိပို စစ်ဆေးနိုင်လာခြင်း၊ HIV ပိုးတွေ့လူနာများ အတွက် ARV ကုထုံးရရှိရေး ပိုမိုညွှန်းပို့ နိုင်လားခြင်းစသည့် အကျိုး ကျေးဇူးများကို ခံစားရစေနိုင်သည်။
From 1st July 2020, AHRN-Hpakant project started Community based HIV screening (CBS) in accordance with the National AIDS Program Myanmar guidelines. AHRN Hpakant covers5Urban Wards and 15 villages for harm reduction services in Hpakant Township. CBS activities will strengthen Reach to Test (increasing number of drug users who knows their HIV status), more client contact at hard-to-reach areas and HIV screening and accompanied referral for ART.